Gịnị bụ ihe egwuregwu na otu ị ga - esi nweta ya | Gam akporosis
Gịnị bụ Funimate na otu esi enweta ọtụtụ uru na ya
Ignacio Sala | 21/07/2021 22:00 | Ngwa gam akporo, Nkuzi
Vidio ga-abụ ụbọchị taa. TikTok, Instagram na ugbu a YouTube Shorts, abụrụla ngwa a na - ejikarị eme ihe, ọkachasị ndị ntorobịa, iji biputere obere vidiyo, vidiyo nke kachasị karịa, Ha nwere mmetụta kachasị na netwọkụ mmekọrịta ọhaneze.
Ọ bụ eziokwu na ma TikTok na Instagram na Shorts tinyere n'ọtụtụ ngwaọrụ iji mepụta vidiyo mbụ nke egwu na-esonyere, ọnụ ọgụgụ ọrụ dị obere ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ. ngwa ekepụtara n'ụzọ doro anya maka idezi obere vidiyo dị ka Funimate.
N'isiokwu a anyị ga-elekwasị anya na ngwa a kapịrị ọnụ, otu ngwa na-enye anyị ọtụtụ ọrụ nke anyị nwere ike ibu eze nke netwọkụ mmekọrịta ọ bụrụ na anyị nwere ndidi, oge na echiche.
1 Gịnị bụ ihe ọchị
2 Gịnị Funimate na-enye anyị
2.4 Nkpuchi nkpuchi na ọgụgụ isi
2.5 Karịrị 100 mmetụta
2.6 Jiri egwu kachasị amasị gị
2.7 Ewepụtụ ma jikọta vidiyo
2.8 Malite ma mechie eserese
2.9 Mmetụta ederede
3 Olee otu Funimate ọrụ
4 Ego ole ka Funimate na-efu
Gịnị bụ ihe ọchị
Funimate bụ a zuru ezu video nchịkọta akụkọ dị maka gam akporo na anyị nwere ike ibudata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa, ịzụrụ ihe na-enye anyị ohere ịmeghe ọrụ niile dị n'elu ikpo okwu na mgbakwunye na iwepu mgbasa ozi nke ikpo okwu gosipụtara.
Site na nbudata ihe karịrị nde 10 na ihe karịrị otu nde echiche, Funimate nwere akara ngosi nke kpakpando 4,3 n’ime ise. Ngwa a na-enye anyị ọtụtụ ọrụ, rue ugbu a, enwere ike ịme naanị na desktọọpụ vidiyo nke desktọọpụ.
N'ihi ngwa a, anyị nwere ike ike pụtara montages, jiri otutu ntughari, ihe ngosi, megharia ederede, jiri otutu ihe nzacha iji meputa vidiyo di egwu. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere iji dochie ndabere nke vidiyo na onyonyo ma tinye akwụkwọ mmado iji mee ka ihe ndị anyị kere eke mekwuo.
N'ezie, nke a bụ otu n'ime Ngwa kachasị eji mepụta vidiyo maka TikTok maka ịdị mfe ya, ebe ọ bụ na ị gaghị abụrịrị ọkachamara n’idezi ihe a na-ege ntị ka ị nwee ike mezuo echiche anyị, agbanyeghị otu ha siri yie ya.
Otu n'ime ihe kachasị ọhụrụ nke agbakwunyere n'oge na-adịbeghị anya na ngwa ahụ bụ ịmekọrịta egbugbere ọnụ, ezigbo maka karaokeing egwu kachasị amasị gị. ọrụ dị ka nke Wombo na-enye.
Gịnị Funimate na-enye anyị
Dị ka m kwuru n'elu, Funimate na-etinye n'aka anyị ọtụtụ ọrụ nke na-agaghị eme ka anyị ghara ịhapụ ihe ọ bụla editọ vidiyo eji mee ihe (Anaghị m ekwu maka Final Cut ma ọ bụ Adobe Premiere, ebe ndị a na-asọ mpi na ọgbakọ dị iche).
Funimate na-enye anyị ọbá akwụkwọ ya nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke akwụkwọ mmado, akwụkwọ ahụaja na mkpuchi nke ga-azọpụta anyị, oge ụfọdụ, ọrụ siri ike nke ịnwe chọta tinye-ons maka vidiyo anyị site na Internetntanetị.
Keyframes dị mkpa iji nwee ike ịmepụta vidiyo dị egwu, ebe ọ na-enye anyị ntụgharị nke anyị agaghị achọta iji naanị ntụgharị. Ọ bụrụ na ịnweghị iji ha, ị na-ewerela
Iji nye mmetụta nke mmiri mmiri na ihe okike anyị, ọkachasị mgbe anyị sonyere vidiyo dị iche iche, ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ọ bụ mgbanwe. Ọnụ ọgụgụ nke ikwu n'ụzọ na Funimate na-eme ka anyị dị nnọọ elu na ha niile nwere a ọkachamara aka. Okwu ndụmọdụ: obere oge mgbanwe na-adịgide, nke ka mma ọ gwụla ma ọ bụ akụkụ bụ isi nke vidiyo.
Nkpuchi nkpuchi na ọgụgụ isi
Amamịghe echiche na-anọkwa na Funimate, ọgụgụ isi nke na-enye anyị ohere iji dochie ndabere nke vidiyo anyị ma, na mberede, tinye mmetụta nkpuchi na ezigbo aka. Ngwa ahụ anaghị arụ ọrụ ebube mgbe ọ bịara iwepụ ndabere. Otutu homogeneous ndabere, ngwa a gha enwe ya dị mfe iji wepu ya ma jiri ihe oyiyi ọzọ dochie ya.
Karịrị 100 mmetụta
Ọ bụrụ na-amasị gị mmetụta, na Funimate ị nwere ihe karịrị 100 mmetụta dị iche iche iji jiri vidiyo gị. Ndụmọdụ: emebila nsonaazụ ya ebe ọ bụ na ọ bụghị ị ga-enwe ike ilekwasị anya na ha ma ọ bụghị na ọdịnaya.
Jiri egwu kachasị amasị gị
Dabere na ebe ị chọrọ kpọgidere gị kere eke, ị ga-gaa na akaụntụ nwebisiinka nke songs ị ga-eji. Jiri Funimate ị nwere ike iji ọ bụla song na ibudatara na ngwaọrụ gị na mbụ.
Banyere nwebisiinka, Shorts si YouTube bụ nhọrọ kacha mma ebe ọ bụ na ọ na-enye anyị ohere iji abụ dị na nke a n'elu ikpo okwu na video format kpamkpam n'efu na-enweghị nsogbu na ikpo okwu, iji nwee ike monetize ọdịnaya n'ọdịnihu.
Ewepụtụ ma jikọta vidiyo
Maka vidiyo ka ọ bụrụ nke ọma ma na-adọta anya, enweghị ike ịmepụta naanị otu ụgbọelu, nke kachasị mma bụ na ọ na-egosi ụgbọ elu dị iche iche iji nye mmekọrịta na vidiyo. N'echiche a, Funimate, dị ka ezigbo ngwa bara uru nnu ya, na-enye anyị ohere ịkpụ, belata ma sonye vidiyo na enweghị nsogbu na n'ụzọ dị mfe.
Malite ma mechie eserese
Ọ bụrụ n’ịchọrọ inye ndị na-eke ihe gị aka dị iche iche, ị ga-enwerịrị isi abụọ na ngwụcha. N’echiche a, Funimate na-enye anyị ọtụtụ ụdị mmemme dị iche iche tinye ma nmalite ma na njedebe nke vidiyo anyị mepụtara na ngwa ahụ.
Kedu ihe ga-eme vidiyo idezi vidiyo ma ọ bụrụ na ọ kweghị ka anyị tinye ma hazie ederede ahụ? Ngwa a na-enye anyị a ụdị dịgasị iche iche nke ederede na ihe nkiri iji ederede gosipụta ihe anyị chọrọ ikwu ma ọ bụ nke anyị na-enweghị ike ikwu site n'okwu.
Olee otu Funimate ọrụ
Ọrụ Funimate dị mfe, nke mere ka ọ bụrụ otu n'ime ngwa ndị kachasị ewu ewu iji mepụta vidiyo maka TikTok. Ihe mbụ anyị ga - eme bụ ịhọrọ vidiyo ma ọ bụ vidiyo anyị chọrọ dịrị n'otu iji kee ihe okike anyị.
Mgbe ahụ, anyị nwere ike ịhọrọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iwepu ndabere nke vidiyo ma dochie ya na onyonyo ọzọ, tinye ederede, akwụkwọ mmado, nzacha ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nke dị iche iche customization nhọrọ awa site na ngwa.
Usoro mmụta nke ngwa a, ọ bụghị nnukwu elu, mana ọ na - ewe oge ịchọpụta etu ọrụ ọ bụla ọ na - enye anyị si arụ ọrụ.
Ego ole ka Funimate na-efu
The Funimate ngwa dị maka gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa iji kpọghee atụmatụ niile ma wepụ mgbasa ozi.
Ozugbo ị mepee ngwa maka oge mbụ, a gosipụtara ozi na na-akpọ anyị òkù ịbịanye ụgwọ ọrụ Funimate Pro, ndenye aha na ọnụahịa ya na euro 3,99 kwa izu.
Ọ dịghị mkpa ịmekọrịta ndenye aha ahụ inwe ike iji ngwa ahụ. Ikwufere ozi a, anyị ga-pịa X nke egosiri na akuku aka nri nke window ahụ.
Ọ bụrụ na anyị akwụghị ụgwọ maka ndenye aha anyị, anyị agaghị enwe ike ịnweta ọrụ ọ bụla na ọ na-enye anyị, mana ndị dịnụ ezuola iji malite ịmepụta vidiyo maka TikTok, Instagram na Shorts ọkachasị. Ọ bụrụ na anyị ahụ na anyị nwere mmasị na ngwa ahụ, anyị nwere ike ịtụle ohere ịkwụ ụgwọ ndenye aha.
Funimate: video nchịkọta akụkọ na video clip mmetụta
Developer: Ụlọ ọrụ AVCR Inc.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Gịnị bụ Funimate na otu esi enweta ọtụtụ uru na ya
Etu ị gha esi edobe ngụ oge na Instagram
Otu kachasị aha maka WhatsApp